Soosaarayaasha Cunnooyinka | Shiinaha haraaga Shirkado, Warshad
Qalab xoog badan
Qalabaynta xoogga sare waxaa loo isticmaalaa hagaajinta iyo isku xirnaanta shaqada mashiinka isku xira. Labada daraf istiinarka waxay leeyihiin xargo, meertada dhexe waxay leedahay kuwa qaro iyo dhuuban. Waxaa loo yaqaannaa ul toosan / kuuskuus, oo sidoo kale loo yaqaan "double-head screw". Guud ahaan waxaa loo isticmaalaa mashiinada macdanta, buundooyinka, gawaarida, mootooyinka, dhismayaasha birta kululeeyaha, baaruudda, dhismayaasha biraha dhaadheer iyo dhismayaasha waaweyn.
Maquufin Hot galvanized haraaga
Hot-faleebo galvanized haraaga waxaa loo isticmaalaa hagaajinta iyo isku xirka function ee isku xira mashiinada. Labada daraf istiinarka waxay leeyihiin xargo, meertada dhexe waxay leedahay kuwa qaro iyo dhuuban. Waxaa loo yaqaannaa ul toosan / kuuskuus, oo sidoo kale loo yaqaan "laba-madax fur". Guud ahaan waxaa loo isticmaalaa mashiinada macdanta, buundooyinka, gawaarida, mootooyinka, dhismayaasha birta kululeeyaha, baaruudda, dhismayaasha biraha dhaadheer iyo dhismayaasha waaweyn. Kadib daaweynta dusha galvanizing kulul, saameynta antirust ayaa la gaaraa.